Weather in Bali in Aprily ~ Journey-Assist - Mandritra ny volana aprily. toetr'andro
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Toetr'andro sy Bali » Weather in Bali amin'ny volana aprily
Weather in Bali amin'ny volana aprily
Amin'ny volana Aprily, miverina amin'ny laoniny ny toetrandro taorian'ny vanim-potoana orana. Ny volana aprily dia heverina ho volana amin'ny vanim-potoana ambony any Bali.
Ny mari-pana any Bali amin'ny volana aprily
Mafana ny andro eto antoandro, ny hafanana antonony dia +33. Ny mari-pana amin'ny alina dia mihena hatrany amin'ny + 22 ° C ao amin'ny nosy ary mafana kokoa ny morontsiraka amin'ny morontsiraka 25-26 ° miaraka amin'ny famantarana fanampiny.
Ny rivotra dia mbola voatanisa ny hamandoana avo - eo amin'ny 65 isan-jato. Mety ho feno lamba indraindray amin'ny alina; matory tsy matory mihitsy raha tsy misy fanamaintanana na fikapohana rivotra. Amin'izao vanim-potoana izao dia misy zavona matevina ary sarona matevina matetika, noho izany dia tsy ilaina ny fanarahana an'i Batur na Abang na tendrombohitra hafa, satria mety ho ambany ny fahitana avy amin'ny tampon'ireo zavona na rahona.
Vakansy volana aprily
Tsy dia misy rotsak'orana ny ankamaroany, amin'ny alina, kely kokoa amin'ny antoandro, ary tsy maharitra izy ireo. Any amin'ny morontsiraka 80-90mm, ary eo afovoan'ny nosy manodidina ny 65mm. Ny orana matetika amin'ny alina dia any amin'ny avaratry ny nosy. Afaka mahatratra hatramin'ny 140mm.
Ny hafanana amin'ny volana aprily
Tena mafana ny rano an-dranomasina, afaka milomano mandritra ny ora maro tsy milahatra ianao. Ny halalin’ny rano dia 29 °. Ny onja dia mihamalemy be rehefa avy ny vanim-potoana ambany, ary ny volana Aprily dia volana mahafinaritra ho an'ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina.
Surfing aprily any Bali
Azonao atao ny manao surfing, toerana fiasana ho an'ireo vao manomboka. Ary ny rivotra sy ny onjan-drano any amoron-dranomasina maro dia marefo.
Teto Aprily daholo ny volana aprily tamin'ny taona 2019. Ny tiako holazaina, tena milay! :).
Fa eny, nahatsapa izany? fa ny fotoanan'ny orana dia nanafaka ny nosy tamin'ny tsy nisy azy.
Ny orana hatrany am-piandohan'ny volana dia indray mandeha isaky ny roa andro. Ankoatra izany, tao anatin'ny telo andro dia nanomboka niseho ny rahona ary tamin'ny dimy ora teo no nanomboka ny orana tsara. Tsy marina ny mitaingina bisikileta eo ambanin'io raketa io. Orana fohy, fa mbola.
Hatramin'ny tapany faharoa amin'ny volana dia nihena be ny orana, ary efa alina na maraina, fa tsy tamin'ny antoandro.
Amin'ny ankapobeny, volana tena tsara dia aprily. Tsy voakantsakana tsara ny orana, tsy dia mpizahatany loatra, mahatoky ny vidiny amin'ity volana ity. Saingy efa mandeha sahady ny natiora. Saingy misy ny fihenan'ny maso eny an-tendrombohitra. Na izany aza, matetika ny haizim-be dia nanjary nihaza ary, ohatra, dia tsy niasa ilay izy mba hanomezana voninahitra ny panoramas avy amin'i Abang. Fa ny tsara tarehy ny fiakarana amin'ny alàlan'ny rahona miakatra. Tena marina ilay izy, nefa tsara tarehy ary tsara, tena milay).
Mafana sy madio ny rano ao anaty ranomasina, malefaka ny masoandro, tsy ampy ny hafanana, mamony frangipani :).
Raha ny momba ny volana fanokafana ny fotoanany tany Bali, dia tsara tokoa ny volana aprily.
Salanisan'ny salanisa 5 / 5. Isan'ny isa: 6